ဘ၀ဇာတ်ခုံ ပန်းမျိုးစုံ: သာသနာ့တက္ကသိုလ်ကြီးနှစ်ခု
Unknown | 6:35 PM | သမိုင်း
တည်နေရာ = မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊ ၆၂-လမ်း၊ ရွှေကျောင်းကြီးအရှေ့ဖက်။
အကျယ်အ၀န်း = ၂၂-ဧက
စတည်တည်ထောင်သည့်နေ့ = ၁၇-၃-၁၉၈၆
စတင်ဖွင့်လှစ်သည့်နေ့ = ၂၁-၈-၁၉၈၆
ကနဦးအလှူရှင် = လူတိုင်းကျောင်းဒကာဖြစ်စေရန်၊ မပင်မပန်းသောအလှူဒါနဖြစ်စေရန်၊ သားစဉ်မြေးဆက် သာသနာ့အမွေဆောင်ရွက်နိုင်စေရန် ရည်ရွယ်လျက် မင်းကွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုယ်တိုင် ဒေသအသီးသီးသို့ ကြွရောက်အလှူခံတော်မူကာ တစ်ဦးလျင် ငါးဆယ်ပြားစီ လှူဒါန်းကြသူများ
အပ်နှင်းသည့်ဘွဲ့ = သာသနာ့တက္ကသီလ ဓမ္မာစရိယ (B.A., Buddhism)၊ သာသနတက္ကသီလ မဟာဓမ္မာစရိယ (M.A., Budddhism) သာသနတက္ကသီလ ဓမ္မပါရဂူ (Ph.D.)
ပညာသင်ရာကာလ = သာသနတက္ကသီလ ဓမ္မာစရိယဘွဲ့အတွက် သင်တန်းလေးနှစ်၊ နယ်စပ်သာသနာပြု နှစ်နှစ်။
သာသနတက္ကသီလ မဟာဓမ္မာစရိယဘွဲ့အတွက် သင်တန်းနှစ်နှစ်၊ ကျမ်းပြုသုံးနှစ်၊ နယ်စပ်သာသနာပြု နှစ်နှစ်၊
သာသနတက္ကသီလ ဓမ္မပါရဂူဘွဲ့အတွက် သင်တန်းနှစ်နှစ် (One year for Intensive English Course & One year for Preliminary Course) ၊ ကျမ်းပြုလေးနှစ်။
ပို့ချသည့်ဘာသာရပ် = ၀ိနယဘာသာ၊ သုတ္တန္တဘာသာ၊ အဘိဓမ္မဘာသာ၊ ပါဠိဘာသာ၊ ပိဋကတ်ဆိုင်ရာ မြန်မာဘာသာ၊ ပိဋကတ်ဆိုင်ရာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ၊ ဗုဒ္ဓဒေသနာပြန့်ပွားရေးပညာဘာသာ။
အထက်ပါအချက်အလက်တို့သည် မန္တလေးသာသနာ့တက္ကသိုလ်မှ အချက်အလက်တို့ ဖြစ်ပါသည်။
ရန်ကုန်၊မန္တလေး ဘွဲ့ရသံဃာဦးရေ = Ph.D. ၅ပါး၊ M.A. (Buddhism) ၃၁၉ပါး၊ B.A. (Buddhism) ၁၆၂၁။ ၁၀-ရက် ပဋိပတ်လုပ်ပြီး = ၂၆၀၀ပါး။ ၄၅-ရက် ပဋိပတ်လုပ်ပြီး = ၄၉၄ ပါး။
သာသနာပြုတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီး = ၁၂၁၆ပါး။
အထောက်အကူပြုသင်တန်းများ =၁။အခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်း၊ ၂။အခြေခံတိုင်းရင်းဆေးသင်တန်း၊ ၃။မဟာစည်ဝိပဿနာတရားစခန်း
၁၃၅၅/ ၁၃၅၆-ပညာသင်နှစ်မှစတင်ကာ တောင်တန်းဒေသ သာသနာပြုလုပ်ငန်းကို စတင်ခဲ့သည်။ B.A.-စတုတ္ထနှစ်တွင် M.A.မပါရှိပါလျင် တောင်တန်းသို့ကြွကြရသည်။ အစပထမတွင် တစ်နှစ်သာ ကြွစေသော် လည်း ၁၃၅၆/၁၃၅၇-မှစကာ နှစ်နှစ်တာဝန်ပေးခဲ့သည်။ နောက်သောအခါ M.A.ပါရှိသော်ငြား တက္ကသိုလ်တွင် ဆရာအဖြစ်ခန့်ထားခြင်း မခံရသူများကို တောင်တန်းသို့ စေလွှတ်ခဲ့သည်။ ထိုသို့ကြွရောက်ကြရမည့် သင်တန်းသားတိုင်း သာသနာပြုနှစ်ပြည့်မှ ဘွဲ့ပေးသည်။ မကြွလျင် ဘွဲ့မပေးပေ၊ သာသနာပြုစဉ်အတွင်း အထက်မှစစ်သဖြင့် မိမိသာသနာပြုကျရာ ကျောင်းတိုက်တွင် မတွေ့ရှိပါက နောက်ထပ်ဆက်နေမှု ဒဏ်ပေးသည်။ ရောဂါကြောင့် ပျံလွန်တော်မူလျင်လည်း ဘွဲ့ပေးခြင်းမရှိပေ၊ ထို့ကြောင့် တောင်တန်းသာသနာပြု သင်တန်းသားတို့သည် အသက်နှင့်ရင်း၍ သာသနာပြုကြရခြင်းဖြစ်သည်။ ၂၀၀၈-ခုနှစ်တွင် မန္တလေးမှသင်တန်းသား အရှင်နန္ဒ၀ံသ(ရေစကြို)သည် မကွေးတိုင်း၊မင်းလှမြို့နယ်တွင် အရှင်ပိယဥာဏ(ထားဝယ်)သည် ကရင်ပြည်နယ်တွင် သာသနာပြုတာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်အတွင်း ငှက်ဖျားရောဂါဖြင့် ပျံလွန်တော်မူခဲ့သည်။ ၂၀၁၂-ခုနှစ်၊ဧပြီလကုန်ပိုင်းတွင် ချင်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)၊ ပလက်ဝမြို့နယ်တွင် အရှင်ပဏ္ဍ၀ံသ(ကန့်ဘလူ)သည် သာသနာပြုတာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်အတွင်း စစ်တွေဆေးရုံတွင် ငှက်ဖျားရောဂါဖြင့် ပျံလွန်တော်မူခဲ့သည်။
နိုင်ငံတော်ပရိယတ္တိသာသနာ့တက္ကသိုလ်ကို ဖွင့်လှစ်လာခဲ့သည်မှာ ၁၃၇၄တိုင်အောင်ဆိုလျင် ၂၆-နှစ်ကြာ ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ စဖွင့်ချိန်တွင် ဓမ္မာစရိယတန်းကို အောင်မြင်ပြီးမှ လက်ခံသော်လည်း ၁၃၅၁-ခုနှစ်မှ စတင် ကာ ပထမကြီးတန်း အောင်မြင်သူများကိုလည်း ၀င်ခွင့်ဖြေဆိုခွင့်ပေးခဲ့သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် သီတင်း ကျွတ်နှင့် တန်ဆောင်မုန်းအတွင်း တစ်လအချိန်ပေးကာ မော်ကွန်းထိန်း ရုံးခန်းတွင် လျှောက်လွှာထုတ် ယူခွင့်ပေးသည်။ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ကျော်တွင် ၀င်ခွင့်စာမေးပွဲဖြေဆိုစေသည်။
၀င်ခွင့်ကို နှစ်ရက်သတ်မှတ်ပြီး ပထမရက်တွင် ၀ိနယ၊အဘိဓမ္မ၊ဗဟုသုတတို့ဖြစ်ပြီး ဒုတိယရက်တွင် ပါဠိနှင့် အင်္ဂလိပ်တို့ဖြစ်သည်။ ရေးဖြေအောင်မြင်သူများသည် နှုတ်ဖြေ(အင်တာဗျူး)ကို ဆက်လက်ဖြေဆိုရ မည်ဖြစ်ပြီး ဆက်လက်အောင်မြင်လျင် အဆောင်နေခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ၀င်ခွင့်ဖြေလိုသူသည် အကြီး တန်း သို့မဟုတ် သကျသီဟ၊စေတီယင်္ဂဏစာမေးပွဲ၏ စာသင်တန်းတစ်ခုခု အောင်မြင်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။ သက်တော်-၃၀၊ ၀ါတော်-၁၀-၀ါအတွင်းဖြစ်ရမည်။ ဥပဓိသမ္ပတ္တိပြည့်စုံရမည် (ကိုယ်အင်္ဂါမချွတ်ယွင်းရ) ။ အောက်ပါဇယားကို အနည်းငယ်ဖေါ်ပြပါမည်။ မိမိသိသလောက်မျှသာဖြစ်ပါသည်။
သာသနတက္ကသီလဓမ္မာစရိယ BA(Buddhism) စတုတ္ထနှစ်အောင်မြင်ပြီး
နယ်စပ်နှင့်တောင်တန်းဒေသသို့ သာသနာပြုကြွရောက်မည့် ရဟန်းတော်များစာရင်း
အထက်ပါ သံဃာတော်များသည် မိမိတို့တာဝန်ကျရာ ဌာနအသီးသီးသို့ ၁၃၇၄-ခု၊ နတ်တော်လပြည့်ကျော် ၆- (၃-၁-၂၀၁၃) ရက်အရောက် ကြွကြရမည်ဖြစ်သည်။ တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြောင်း အစီရင်ခံစာကို သက် ဆိုင်ရာ ဗဟိုခေါင်းဆောင်ဆရာတော်၊ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ မြို့နယ် သာသနာရေးမှူးတို့၏ ထောက်ခံချက်နှင့်အတူ ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုသြ၀ါဒါစရိယအဖွဲ့၊ ကမ္ဘာအေး၊ ရန်ကုန်သို့ ပေးပို့လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ပါသည်။
၁၃၇၄တွင် သင်ကြားစီမံဆရာတော်များ၊ သင်တန်းသားများ၊ ပြင်ပပညာရှင်များမှာ ရန်ကုန်တွင် ၄၄၉-ပါး၊ မန္တလေးတွင် ၃၇၄-ပါး ရှိသည်။ အထက်ပါအရေအတွက်စာရင်းတို့သည် ၁၃၇၄-ခုနှစ်အထိသာဖြစ်ပါသည်။
ရးချင်လွန်းသဖြင့်သာ ရေးလိုက်ပါသည်။ အမှားပါလျှင် ပြန်လည်ပြင်ဆင် ထောက်ပြပေးပါ၊ မိမိရေးသားသူ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပါမည်။